Latest Update Archives - Page3of3- Fashion Myanmar
သဘာ၀ဆန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လူသိများကျော်ကြားလတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုနှင့် သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေး ဥဥ< a>
တည်ငြိမ်တဲ့အလှတရားနဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တွေကိုဖမ်းစားထားတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေး မိုး ကတော့ ဘယ်လိုအ၀တ်အစားမျိုးနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။July ၃ရက်နေ့မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အတွက် ”မိုးတို့တွေ မိန်းကလေးဆိုအားငယ်တတ်တယ်၊ ပျော့ညံ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်အစွဲတွေကိုထုတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ကြိုးစားနေကြသော ထက်မြက်ပြီး မိန်းမတို့ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိမှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်” လို့ အမျိုးသမီးထုအတွက်< a>
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခွက်လေး လက်ဆောင်ရတဲ့ဖွေး
ထိပ်တန်းမင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့ဖွေးဖွေးဟာ အနုပညာမှာ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင် သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ပြင်ဆင်နေထိုင်မှုများကြောင့်ချစ်ခင်သူပရိတ်သတ်အမြောက်အမြားပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖန်ခွက်လှလှလေးရထားကြောင်းသူမ Facebook Page မှာ ”သူ ​ပေး တဲ့ ကြာဖန်ခွက်​လေ ”ကြွားထားပါတယ်။ သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုအောင် ပေးတဲ့သူဟာ..သူမသူငယ်ချင်း စာရေးဆရာမ မာရင်ရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ချစ်ခင်သူပေါများတာ ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်တစ်ခုပါနော်။< a>
Mitsubishi အတွက် ကြောငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ပန်းရောင်တို့မိသားစု
အသံချိုချိုလေးတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အလှရှိတဲ့ အဆိုတော်မလေး ပန်းရောင်ခြယ်ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်.. Cute Press ရဲ့ Brand Embassador တစ်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ပန်းရောင်ခြယ်ဟာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ရှည်လေးတွေကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဇူလိုင် ၃ရက်နေ့က ပန်း​ရောင်တို့မိသားစု Mitsubishi Xpander 2020 ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေပြီး launch လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်​​လဲတွေ့ကြမယ်လို့ သူမက ဖိတ်ခါ်ထားပါတယ်။ < a>
အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့နီနီက မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၉၈၀ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးနဲ့ မန်းန္တလေးကျူံးကိုနောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့အလှဓာတ်ပုံလေးတွေပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ် ❤️ မြန်မာအမျိုးသမီးများ လှပကျော့ရှင်း၊ သိမ်မွေ့ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးများ ဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက် 🙏 မြန်မာအမျိုးသမီးများ​နေ့အတွက် ချစ်တဲ့ နီနီ လို့ရေးသားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်< a>
သားသားမီးမီး (၂)ယောက်မေမေဖြစ်ပေမယ့် အရင်လို လှသွေးကြွယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့< a>
ကစ်ကစ်က ကျွန်မချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးနေရတာနဲ့တင် လုံလောက်နေပါပြီ 💚တဲ့< a>
ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့အလှနဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်< a>
L’Oréal Paris က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Live Event Session မှ မိုးဟေကို
26.6.2020 မိုးရဲ့မွေးနေ့ညလေးမှာ မိုးအနေနဲ့ L’Oréal Paris က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Live Event Session မှာ အားလုံးနဲ့တူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် L’Oréal Paris Team နှင့်တကွ ဒီ Live Event လေးဖြစ်မြောက်အောင် တာဝန်ယူစီစဉ်ခဲ့သော ဆရာဂျွန်လွင်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပါနော်❤️…. ပြီးတော့ ဒီညလေးမှာ မိုးကို Stunning Look ဖြစ်အောင် လှပတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့ ကိုမင်းသက်စံ (Sweet & Smart Fashion Collection) နှင့် ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ Life< a>
အရမ်းချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ M Seng Lu
အရမ်းချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ M Seng Lu < a>
ဒီနေ့ဒေစီပန်းလေးတွေလက်ဆောင်ရတယ်…ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်…ဘုရားပန်းလေးကပ်လှုူပူဇော်လိုက်ပါတယ်ရှင့်….စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ရှင့်…. ပန်းလှလှလေးတွေပို့ပေးတဲ့မမမန်းသူလည်း…ရေလိုအေးလို့ပန်းလိုမွှေးပါစေရှင်❤️❤️< a>
မိုးFanတွေ မိုးအပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ ဒီအဖြူရောင်လိုပဲ မိုးရင်ထဲကိုအေးမြစေတယ်လို့ အပီချုပ်လိုက်တဲ့ မိုးဟေကို < a>
Nang Mwe San (နန်းမွေစံ) ရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံအလှများ
Nang Mwe San (နန်းမွေစံ) is one of the famous sexy models in Myanmar (Burma) and please check out her beauty in beautiful and attractive Myanmar dress. And of course, Myanmar dress are always the best for all Myanmar< a>
Nan Su ရဲ့ မိုးရာသီ Fashion
Nan Su ရဲ့ အလွမ်းရာသီ လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ မိုးရာသီ Fashion Myanmar Famous Model and Actress Nan Su (Nan Su Yati Soe)’s Raining Season Fashion is totally outstanding especially with light purple dress, transparent umbrella is also match with her white skin color. Well< a>
ပုဂံအလှမှာ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ Pacteria